Kukarukureta lumens of simba rokuponesa mwenje Mabumba Green Renewables
Tomàs Bigardà | | Simba rekuchengetedza, Kumba Economics, Renewable simba
Kuchengetedza tinoda kushandisa Simba rekuchengetedza mabhalibhu, uye tinozvipatsanura izvi zvinoenderana nezvavanazvo kupenya, kuburikidza neyuniti yechiyero "lumens"Kana kuti"lumens", Iyo inoratidza huwandu hwechiedza chakaburitswa.
Asi, mabhanditi emagetsi (yekare) chiyero chayo yaive iyo Watts (W), izvi zvinoratidza kuti yakawanda sei magetsi kupedza.
Chinyorwa chinotevera chinoedza kutsanangura maitiro ekuverenga maLumens emabhuru.
1 Chii chinonzi Lumen? uye kuti ungaiverenga sei
2 Nzvimbo dzakabatidzwa zvakanaka
4 Tafura yeZvakaenzana
Chii chinonzi Lumen? uye kuti ungaiverenga sei
Mubvunzo wekutanga watinofanira kuzvibvunza ndewekuzvibvunza isu kuti chii maLumens?
Iwo ma lumens, ndicho chikamu cheInternational System of Measurements kuyera kubwinya kunoyerera, chiyero chesimba rinovhenekera. yakaburitswa nekwaibva, mune ino girobhu racho.
Kuziva lumens iyo inogadzira girobhu re LED Iko kune fomula: Real lumens = Kwete yewatts x 70, 70 iri avhareji kukosha iyo yatinowana mumazhinji mababu. Zvinoreva, 12W akatungamirira girobhu racho yaizopa kuburitswa kwechiedza che840 lm. Izvo zvakanyanya kana zvishoma ndizvo zvinogadzira a 60W incandescent girobhu racho. Sezvauri kuona, nekugadzira mwenje wakaenzana wechiedza, tinochengetedza 48w yega yega girobhuvhuru ratinodzora.
Nzvimbo dzakabatidzwa zvakanaka
Kugadzirisa nyaradzo yemakamuri akasiyana eimba, ese anofanirwa kuve akajeka mwenje. Uye zvakakosha kuziva izvozvo "Zvakanaka mwenje" zvinoreva kuti nzvimbo yega yega inofanirwa kuve nemwenje wakaringana: kana kuwanda kana kushomeka pane zvakafanira. Kana huwandu hwechiedza husina kukwana, maziso anomanikidzwa kushanda zvakanyanyisa, uye izvi zvinotungamira mukuneta kwekuona, izvo zvinokonzeresa zviratidzo zvakaita sekutemwa nemusoro, kutsamwiswa kwemaziso nekurumwa, kurema mumaziso, nezvimwe.
Kana yuniti yanyatsotsanangurwa, tinogona kuyedza kuverenga ingani magetsi ekuchengetedza magetsi mababu anodikanwa yenzvimbo yakatarwa, inogona kuve chero chikamu cheimba.
Izvi zvinoreva kuti, kana imba yakavhenekerwa negirobhu 150 lumen, uye nzvimbo yemakamuri iri gumi mativi metres, mwenje wekuvhenekesa uchave 10 lx.
Imba yekicheni: kurudziro yekuvhenekesa kwakawanda iri pakati pe200 uye 300 lx, kunyangwe yenzvimbo yebasa chaiyo (panotemwa chikafu nekugadzirwa) inokwira kusvika pa500 lx.
Kufambisa switching kubva watts kuenda lumens, chinova chinhu chitsva, pane tafura inoita kuti zvive nyore kuverenga nekukurumidza watts kune lumens (yakaderera mutengo mababu):
Maitiro mune lumens (lm) KUSHANDISA KUSHANDISWA KWEMAWATTS (W) MAERERANO NETYPE YERI
LEDs Incandescent Halogen CFL uye fluorescent
Tafura sosi: http://www.asifunciona.com/tablas/leds_equivalencias/leds_equivalencias.htm
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Kumba Economics » Kukarukureta lumens simba rokuponesa chiedza Mabumba
osvaldo peraza akadaro
Pindura kuna osvaldo peraza
Kuzvipira kukuru kweBarcelona ku 'simba rezuva'